lahatsoratra 90 725 amin’ny teny malagasy
Manoratra ny Vaovao Mahafaliny i Marka araka ny soratononina ataon'i Petera, nataon'i Pasquale Ottino taimn'ny taonjato faha-17
Ny Filazantsara araka an'i Marka, na Vaovao Mahafaly araka an'i Marka, na Evanjeky araka an'i Masindahy Marka dia faharoa amin'ny Filazantsara ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Ny asa nataon'i Jesosy (na Jesoa) no tian'ny mpanoratra hampitaina: asehony i Jesosy eo am-panatanterahana ny asany amin'ny fanasitranana ny marary, amin'ny fampitomboana isa ny mofo ho an'ny vahoaka. Izany asa izany dia tantarain'ny mpanorara mma hnaporofo anyny maha avy amin'Andriamanitra an'i Jesosy. Tsy latsaky ny 18 ny isan'ireo fahagagana tantarainy. Ao amin'ny andininy voaoohany fotsiny dia efa milaza sahady ny mpanoratra fa i Jesosy no "Zanak'Andriamanitra" (Mar. 1.1) ary any amin'ny faran'io Vaovao Mahafaly io dia taterin'ny mpanoratra ny resak'ilay manamboninahitra miaramila romana teo am-pototry ny hazofijaliana hoe: "Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra io Lehilahy io" (Mar. 15.39).
Asehin'ny mpanorarta koa fa ny fahagagana nataon'i Jesosy dia tsy nataony hitadiavany laza: Fantatr'i Jesosy fa tsy maintsy hijaly izy. Izany no nahatonga ny mpanoratra haneho ny fiainan'i Jesosy ho toy ny fiomanany amin'ny hahafatesany. Im-betsaka i Jesosy no manambara mialoha ny hijaliany sy ny hahafatesany. Amin'ny mpanoratra dia vaovao tsara izany fahafatesany izany satria mahatanteraka ny faminanian'i Isaia (Isaia 53.12): avy izy "hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro" (Marka 10.45) sady araka ny efa nambarany dia hitsangana amin'ny maty izy satria tsy afaka ny hitoetra ao am-pasana ny Zanak'Andriamanitra.
Ny Filazantsaran'i Marka dia nosoratana ho an'ireo Kristiana avy amin'ny Jentilisa (na Jentily) izay tokony hanazavana tsara ireo fitenenana avy amin'ny fiteny arameana sy hebreo ary tokony hanazavana ny fomba amam-panao jiosy. Isan'ireo Filazantsara sinoptika ny Filazantsaran'i Marka. Teo anelanelan'ny taona 60 sy 75 no nanoratana azy. (tohiny...)
Alatsinainy, 28 janoary 2019
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Alatsinainy 28 janoary ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.